Xulka Haweenka Mareykanka oo u soo baxay semi finalka koobka adduunka ee kubada cagta… – Hagaag.com
Xulka Haweenka Mareykanka oo u soo baxay semi finalka koobka adduunka ee kubada cagta…
Posted on 29 Juunyo 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Ciyaarta ayaa Waxay u muuqatay sida finalka oo kale, uma ekeyn quarterfinal, labada xul ayaa ahaa kuwa ugu cadcadaa koobka adduunka ee kubada cagta ee Haweenka 2019, ciyaarta ma aheyn mid sahlan, garoonka ayaa buux dhaafay, waxaa lagu kala iibsanayey ticket-ka kumanaan dollar kursi keliya, waxaa labada dhinac heystay cadaadis aad u xooggan.
Waxay u ekeyd guusha ciyaartaasi mid ka sareysa tan quarterfinalka kulankii haweenka USA iyo France oo dhacay Jimcihii, waxaa laga yaabaa oo xataa u ekeyd finalka koobka adduunka ee Haweenka ee kubada cagta.
Waxaa sidoo kale shaki la geliyey in kooxda Maraykanku oo difaacaneysa koobka adduunka laga yaabay in laga badiyo isla markaana ay lumiso hogaaminta kubada cagta haweenka ee Adduunka.
Qofna uma muuqan inay si wanaagsan u diyaargaroobeen kooxda Mareykanka, halka gabadha afka hore ka cayaarta ee Mareykanka Megan Rapinoe ay dhalisay labada gool ee USA ku dardartay kooxda Faransiiska oo ay ku badiyeen 2-1, waxaa garoonka Parc des Prinses soo xaadiray 45,595 qof, sidaasi darteed Mareykanka ayaa u soo gudbay semi finalka koobka adduunka ee kubada cagta Haweenka. Waxayna la ciyaari doonaan xulka qaranka Ingriiska.
Dhinaca kale Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku cambaareeyey Rapinoe oo sheegtay in ayna booqan doonin Aqalka Cad haddii Mareykanka uu ku guuleysto koobka adduunka markii 4aad.